Burundi oo ku gacan seyrtay ciidamo boolis ah oo ka socda Qaramada Midoobay – The Voice of Northeastern Kenya
Burundi oo ku gacan seyrtay ciidamo boolis ah oo ka socda Qaramada Midoobay
Dowladda Burundi ayaa gaashaanka ku dhufatay qorshe lagu doonayo in ciidamo boolis ah oo ka socda Qaramada midoobay lagu geeyo wadankaasi.
Ciidamadaasi oo ay tiradooda gaareyso 228 askari ayaa lagu waday in ay Burundi ka sameeyaan howlgallo lagula soconayo xadggudubyada ka dhanka ah bani’aadanka iyo in ay isku dayaan in ay xasiloonida dib ugu soo celiyaan wadanka Burundi oo uu qalalaase ka socdo mudo ka badan hal sano.
Af hayeen u hadlay xukuumadda Bujumbura oo lagu magacaabo Philippe Nzobonariba ayaa ku dhawaaqay mowqifka dowladda Burundi kadib markii ay golaha amaanka ee qaramada Midoobay maalintii talaadada ahayd soo saareen qaraar ciidamada booliska UN-ka lagu geynayo dalkaasi.
Baahida ku aadan in booliska Qaramada Midoobay la geeyo Burundi ayaa badatay kadib markii ay sare u kaceen tacadiyada loo geeysto dadka, gaar ahaan garabka mucaaradka.
Masuuliyiinta Burundi ayaa sheegay in tallaabo kasta oo ciidamo lagu geeyo dalkooda iyagopo aan lagala tashanin ay xad gudub ku tahay madaxbanaanida dalka Burundi.
Wadanka Burundi ayaa xasilooni darro ku jiray tan iyo bishii April ee sanadkii lasoo dhaafay kadib markii uu madaxweynaha dalkaas Pierre Nkurunziza ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan in uu mar 3-aad xilka u tartamayo, isagoo markii dmabena ku guuleystay doorasho uu muran badan hareeyay.
In ka badan 500 oo qof ayaa lagu dilay rabshadihii ka dhacay Burundi oo ay ku barakaceen ugu yaraan 270,000 oo qof, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
← Weerar lala damacsanaa xarunta ciidamada GSU-da oo la fashiliyay
Sarkaal ka tirsan booliska oo lagu eedeeyay weerarki lagu qaaday saldhiga booliska ee Kapenguria →